Home » Critic » X the လိုင်း ;-)
(အိုင်တီ Admin လုပ်တုန်းက စက်တွေ နဲ့ ဆက်ဆံရတာ Crossed the line လို့ ဘယ်တော့ မှ မပြောရှာဘူး။)
တကယ်တော့ အရှေ့မှာပြောတာက နိဒါန်း ချီလာတာ လို့ ပြောချင်တယ်။
Cross the line ဖြစ်ခဲ့ ရင် ခွင့်လွှတ်ကြဖို့။
.နိုင်ငံခြားနေသူဖြစ်တာမို့.. စာမူခမရပေမဲ့ ပွိုင့်တော့ ၅၀၀၀ တိုးပေးထားပါမယ်..။
၄) စာမူကို.. editor@myanmargazette.net ဆီ တိုက်ရိုက်ပို့ပေးစေလိုပါတယ်..။
သူကြီးကို အဲဒါမျိုး ပြောမှရမှာ ဘာစည်းမှ မကျော်ဘူး ပြောသာပြော ချစ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပါပေါ့ အရီးရယ်
. အော့ကျောလန် အစ်မကို အားပေးတယ်လား ကိုနို။
ဆရာတစ်ယောက်က ပြောတာ သတိရလို့ ပြန်ပြောပြရအုံးမယ်။
လူတစ်ယောက်ကို သိန်း၅၀၀ ပေးမယ်၊ ရပြီးရင် အိပ်ပဲနေရမယ်၊ နိုးလာရင် ပြန်သိမ်းမယ်လို့ ဆိုသလိုဖြစ်နေပြီ။
Crosset the line ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သဘောကျလို့ မှတ်သွားပြီ။
Cross the line Idiom က to do something wrong (ဒါမှမဟုတ်) behaving inaway that is not socially acceptable တဲ့။ lol:-)))
ကိုယ့်ဖက်က ပိုပေးမိတာ ကိုယ့်အမှားမို့ ကိုယ့်ဖာသာ ခွက်ဒစ်နုတ် လှုပ်ခွင့်မရှိ။ အနော်သာစို ပိုပေးငွေ ချက်နံဗါတ်၊ နေ့ဇွဲ ရည်ညွှန်းဂျက်ပေးပီး ဘီလ်ကို လျော့ ပေးမည်။ မိမိက ပေးရသူ ဟိုဖက်က ရောင်းသူပဲဟာ ကြောက်ဆရာ မလို။ သူ့ဖက်တွင်လည်း အကြောင်းပြချက် ရှိနိုင်သီ။ ကပ်စတန်မာဆိုလျင်သာ အလှုပ်ရခက်သီ။ ဆပ်ပလိုင်းရာကတော့မှုဆရာမလို။ အနော့်သာ လာလှုပ်ကြည့် … လော်ဘီသော အန်အယ်လ်ဒီသော ဂုမစိုက်… တယားရုံး တက်တိုင်မည်။ ထောင်ခြပစ်မည်။
တို့များ မြန်မာ ထိုးထွင်းဉာဏ်လို ဟိုပြောင်းဒီလှည့် မလုပ်တတ်ကြဘူး။
အဲဒီတုန်းက ကိုယ်ကဘဲ တောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ :-)))
အိမ်ယှဉ်အိန်ငါး ပြသနာ မြင်းကျီးဗျာ အမ်တီလော်ဗီမြ…။ အိမ်ယှဉ်ဂ မွမ်းမာန်ထိန်းသိမ်း လှုပ်မပေးလို့ အိမ်ငှားဂ မပေး လှုပ်လို့မြ။ အဲလိုဗဲ သူ့စမှားလို့ ငါးပျံမှားတယ် မစိုင်ဖူး။ သူစထိုးလို့ ကိုယ်ပျံထိုးရင် နှာယောက်စာလုံး ဂတ်ထဲရောက်တာပဲ။ ဂုပြသနှာက ကိုယ့်မှာအခွင့်မယှိဘဲ သုပိုင်နှပ် ကြူးကျော်မိဒါ။ နိုင်ငံဒေါ်ပုဏ်ကံမှုနီးဗါး အပြစ်ကျီးသယ်။ အနော်သာစို နှာခါတောင်းသမို့ direct debit အကောင့် ရပ်လိုက်ရမလား မေးမည်။ သူတို့အမှား ပျံဝံခံခိုင်းဒဲ့ သဗောပေါ့။ အိုကေဆိုလို့ကဒေါ့ ချက်ပရင့်ထုတ် လာဘ်ထဲကိုင်ထား ပညာပြလှိုက်မှာ…။
Accouting Software ထဲ မှာ Credit Note နဲ့ ဘဲ သွားလို့ ရတာ ကြောင်ကြောင် ရဲ့။
ကိုယ့်ဖက်က နှာခါ ပေးမိထားတာ၊ လဆင်ဘဏ်ရှင်းဓါန်းမှာလဲ မြင်နေရဒါ ဘာပူဆြာလိုလဲဂျ။ သူတို့ ပိုက်ချံလျော့ ရဒဲ့အခါ ဘာကြောင့်ဆိုဒါ reference မြင်ဒဲ့အခါ တွေ့လိပ်မပေါ့။ အဲဒီကြ ခွက်ဒစ်နုတ် ပို့လိပ်မဲ။ အဲဒိကြ လာဘ်ကြံဘီလ်ငွေကို အဲဒီခွက်ဒစ်နဲ့ ရှင်းထုတ်လှိုက်ပေါ့။ နှစ်အကုန် စာရင်းပိတ်ရက် မှုတ်ရင် ပြသနှာရှိပါဘူး..။။
ဟုတ်။ မှတ်ထားပါပြီ။ :-)))
ဒါထက် နီ က အင်ဒုံနီယာ မဟုတ်လား။ ဒါတွေလဲ တတ်တယ်လား။
အနော်က ဂေါင်း…..
အမှန်တော့ ကိုယ့်ဘက်က နဲနဲ လောသွား မိတာ အမှားပါ။
အဲ့ပို့စ်ကို ပြန်သွားဖတ်မိတယ်။ စာမူတစ်ပုဒ်ကို နိုင်ငံခြားသူမို့ ပွိုင့် 5000 ပေါ့နော်။ ရွာထဲမှာ ပွုင့် 5000 ဆိုတာ ကျပ်ငွေ ငါးထောင်နဲ့ ညီမျှတယ်လို့ ထင်မိတာပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာတော့ စာမူတစ်ပုဒ် အနည်းဆုံး ၁၀၀၀၀ကျပ် ရပါသတဲ့။ ခိခိ ပြောကြည့်တာပါ။ ပြောကြည့်တာ။
ဂီဂီကို တလောကတင်.. ပွိုင်၁သိန်း၂သောင်းကျော်ကို.. ၅သောင်းနှုတ်ပလိုက်တာ.. အခုမြင်ရတဲ့ပွိုင့်ဖြစ်နေတာပဲ..။
အခုလိုလှူရသောအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်… ရောက်လာတဲ့ဘီလ်တိုင်း… ငွေ၂ခါပြန်ပေးနိုင်လောက်အောင်.. ချမ်းသာသူဖြစ်စေ..။
. နောက်ဘဝ ထပ်ပြီး ရေစက်ဆုံ နေမစိုး လို့ သူကြီး ကို တော့ အလှူ မထည့်ပါရစေနဲ့တော့။
ဒီတစ်ခါ တော့ ထိပ်တန်း ၁၀ ယောက်ထဲ က တစ်သိန်းပြည့် ပြီး သူ တွေ ထုတ် တာ “၃ ယောက် ” လို့ ဖြစ်အောင် မှတ်တမ်းတင်ပေးပါ။
.ဘာဘာ ဘာမှမပြောတတ်ပါ :))